Hirshabeelle oo ka mahad celisay doorka ay Dowladda federaalka ka geysatay caawinta Dadka ku waxyeelloobay fatahaadda Webiga Shabeelle – Radio Muqdisho
Hirshabeelle oo ka mahad celisay doorka ay Dowladda federaalka ka geysatay caawinta Dadka ku waxyeelloobay fatahaadda Webiga Shabeelle
Guddoomiyaha Baarlamanka Hirshabeelle, Sheekh Cusmaan Barre Maxamed, ayaa ka mahad celiyay doorka ay Dowladda federaalka Soomaaliya ka geysatay fatahaadda uu Webiga Shabeelle ka geystay Magaalada Baladweyne.
Sheekh Cusmaan , oo Khadka Taleefanka ugu Warramayay Wakaaladda SONNA isagoo ku sugan Magaalada Jowhar, ayaa tilmaamay inay jiraan dedaallo baaxad leh oo ay waddo Dowladda dhexe halkaasna ay gaareen madaxda ugu sarraysa Dalka, balse ayan ku fillayn, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in lasii Laba laabo howsha socota.
Guddoomiye Sheekh Cusmaan Barre ,ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan Lacago badan oo ay ku deeqeen Dowladda Federaalka, Gobolka Banaadir, qaar ka mid ah maamullada Dalka iyo Bulshada Hirshabeelle, wuxuuna intaa raaciyay inay jiraan ballanqaadyo ka imanaya Dowlad Goboleedyada iyo hay’adaha samafalka.
“Runtii gurmad badan waa jiraa Dowladda Soomaaliyaa ugu horreysa oo ku deeqday Lacag badan, Gobolka Banaadir sidoo kale, maamullada kale qaarkood, Reer Hirshabeelle laftooda wey isku gurmadeen, ayuu yiri Guddoomiyuhu.
Sheekh Cusmaan ayaa Dadka ku barakacay daadadkii ka dhashay fatahaadda ku qiyaasay Boqol Kun oo Qoys, wuxuuna intaa raaciyay inay jiraan dhimasho, bur-bur hantiyeed iyo khasaarooyin kale oo sida looga soo kabtaa ay adag tahay.
Hay’adaha gargaarka ayuu ugu baaqay inay sii Laba laabaan dedaallada lagu samata bixinayo Dadka ay saamaysay fatahaadda, isagoo walaac ka muujiyay Garoonka Diyaaradaha oo ku xirmay Roobab iyo Daadad is biirsaday, taasoo gaabis ku keeni karta gurmadkii loo fidin lahaa Dadka ku tabaalaysan duleeddada Magaalada Baladweyne.
Guddoomiyaha Baarlamanka maamulka Hirshabeelle ,ayaa sheegay inay xallin doonaan cabashooyinka ka yimmaadda Bulshada dhibbanayaasha ah xilliyada ay dhacaan musiibooyinkan oo kale, wuxuuna ballan qaaday inay si habsami leh u gaarsiin doonaan Dadka loogu tala galay deeqaha kala duwan ee ka yimid Dowladda federaalka iyo hay’adaha caalamiga ah ee samafalayaasha ah.
Ra”iisul Wasaare Kheyre iyo Wefdi uu hogaaminayo oo dalka dib ugu soo laabtay
Tababar loo soo xiray Ciidan ka tirsan Ururka 60-aad ee qaabilsan Ilaalada Madaxtooyada+Sawirro